ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ၂၀၂၀ အကြို စဉ်းစားစရာများ - MoeMaKa Media
Home / 2020 Election / Currents / Opinion / Zaw Aung (Mon Ywa) / ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ၂၀၂၀ အကြို စဉ်းစားစရာများ
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ၂၀၂၀ အကြို စဉ်းစားစရာများ
2020 Election, Currents, Opinion, Zaw Aung (Mon Ywa)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အင်အယ်ဒီအစိုးရ ၄နှစ်အုပ်ချုပ်ပြီး ၂၀၂၀ နောက်ဆုံးနှစ် ကာလမှာ ပြည်တွင်းအရေးအခင်းများစွာ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ လက်ရှိ အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ ကျောင်းဆရာမ နဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်း ၅သိန်းကျော် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေ မတ်လကုန်ထိ ဖွင့်မယ် လို့ အစိုးရအစီစဉ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္နပြမှု များကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံသူများ ကွဲပြားနေကြပါတယ်။ ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလိုလားတဲ့ အာဏာရှင်စနစ် ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအုပ်စု တွေကတော့ အင်အယ်ဒီ အစိုးရ အခက်ခဲဖြစ်လေလေ ကြိုက်လေလေ ပါပဲ။ ခြေဥ ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ၄၅ဦးကော်မတီလည်း ပြင်ဆင်ပြီးမူကြမ်း လွှတ်တော်ကို တင်ပြီး ကော်မတီတာဝန် ပြီးလို့ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ တပ်မတော် သဘောမတူပဲနဲ့ အင်အယ်ဒီပါတီက အတင်းအကြပ် လုပ်နိုင်သော်လည်း..အတင်းအကြပ် လုပ်မဲ့အခြေအနေ မရှိပါ။
တိုင်းပြည် အခြေအနေက လက်နက်ကိုင်ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ ဘယ်လောက်အထိ အာမခံ ရပြီလဲ ..တပ်မတော်ကလည်း အဲဒီအချက် ကိုပဲ လက်ကိုင်ထားမှာ သေချာပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် များကတော့ တပ်မတော်ကို အမြင်မကြည်ကြပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း အတူတူပဲ လို့ မြင်လာကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်နဲ့ အင်အယ်ဒီ နိုင်ငံရေးအင်အားပြိုင် နေကြတာ ပကတိအခြေအနေမှန်ပါ။ ၂ဖက်စလုံးက မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ကြီးပွားရေး လုပ်နေကြတာလဲ ပကတိအခြေအနေမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ၂ဖက် ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်ရာမှာ တတိယအင်အားစု ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ က စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
မျက်စေ့ရှေ့မှာပဲ တိုးတက်လာတဲ့ ဗီယက်နမ်. အင်ဒိုနီးရှား ၂နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေက မြန်မာခေါင်းဆောင်များ အတွက် အကောင်းဆုံး စံနမူနာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ထိတ်တန်း ရောက်သွားတဲ့ တရုတ်. စင်ကာပူ. တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံများရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု ကလည်း စံနမူနာ ယူရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး. စစ်ရေး အင်အားအကြီးဆုံး အမေရိကန် ခေါင်းဆောင်များ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြည့်ရင်လဲ အတူတူပါပဲ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကို လိုက်တဲ့နည်းလမ်း တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။
မလိုက်နိုင်ရင် ထွက်ပြီး တစင်ထောင်တာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ပါ။ ပါတီက ထုတ်ခံရလည်း အာဏာရှင်စနစ်လို ထောင်ကျ၊ မိသားစုဘဝပျက် တာမျိုး မရှိသလောက် နည်းသွားပါပြီ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ လုံခြုံရေး များများ ရှိရပါတယ်။ သိပ်ကြမ်းတမ်းလို့ မရပါ။ မီဒီယာ အလွန်အားကောင်း နေပါတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရန့် ကိုတော့ ပေါ်ခဲ့သမျှ သမတပေါင်း ၄၅ယောက်မှာ အညံ့ဆုံး ၁၀ယောက်စာရင်း သွင်းထားပါတယ်။ အကောင်းဆုံး သမတ ၁၀ဦး စာရင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို မပြိုကွဲအောင် စစ်တိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပထမဆုံးသမတ ဂျော့ဝါရှင်တန် နဲ့ အီဗရာဟင်လင်ကွန်း ၂ယောက်ကို အမြဲ ရွေးချယ်ကြတယ်။ အကောင်းဆုံးသမတ တွေက အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေး ရယူစဉ်က သမတ ၅ဦး ဖြစ်နေတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကြီးကို ခေါင်းဆောင်ကောင်းများက ကြီးမားတဲ့ဦးနှောက်. ကြီးမားတဲ့ နှလုံးသား နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဂျော့ဝါရှင်တန် ဘဝကို လေ့လာရင် စိတ်သဘောထား ကောင်းလှတယ်။ မိဘတွေက တတ်နိုင်တယ်။ ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့တယ်။ အသက်၂၆နှစ်အထိ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာ စစ်ဗိုလ် လုပ်ခဲ့ပြီး အနားယူ. အိမ်ထောင်ပြုတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်လာတယ်။ အသက်၄၀ကျော် အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေး စစ်ပွဲမှာ ကွန်ကရက်က စစ်ဗိုလ်ချုပ် (ကာချုပ်) ခန့်ပြီး ၁၀နှစ်လောက် အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန် ခဲ့တယ်။ စစ်တပ်ကအနားယူ နေရပ်ပြန်နေချိန် အမေရိကန်ကွန်ကရက်က သူ့ကို သမတအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်များက ပြည်ထောင်စု တိုးတက်ရေး အတူလုပ်ကြပေမဲ့ မြန်မာပြည်က တပ်မတော်နဲ့ အင်အယ်ဒီ လို အုပ်စု၂ခု ကွဲသွားကြတယ်။ သောမတ်ဂျက်ဖာဆင် နဲ့ ဟာမင်တန် ၂ဦး အုပ်စု၂ခု သမတဂျော့ဝါရှင်တန် ခေါင်းဆောင်မှုအောက် ပါတီ၂ခုဖွဲ့ပြီး အာဏာပြိုင်ကြတယ်။ ဂျော့ဝါရှင်တန် ကိုတော့ အားလုံးက လေးစားကြတယ်။ ဂျော့ဝါရှင်တန် က သမတသက်တမ်း တစ်ကြိမ်ပဲ လုပ်ဖို့ ဒါပေမဲ့. အုပ်စု၂ခု အခြေအနေ တင်းမာမှုကြောင့် နောက်ထပ်၄နှစ် သမတဆက်လုပ်ရတယ်။ ၂ကြိမ် လုပ်ပြီးတော့ အနားယူသွားတယ်။ နောက်တက်လာတဲ့ သမ္မတ ၅ဦးစလုံး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အမေရိကန် အကောင်းဆုံး သမတ ၁၀ဦးစာရင်းမှာ ကနဦး သမတများ အမြဲပါဝင်တယ်။ နှစ်၂၀ ကျော် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ဉီးဆောင်ကြတယ်။ သောမတ်ဂျက်ဖာဆင် ဆိုရင် လဲ အလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတန်း နဲ့ ပညာရေးစနစ် တွေကို သူ့ငွေကြေး အကုန်ခံ တည်ဆောက်တယ်။ သမတ အငြိမ်းစားဘဝမှာ သူ့ဇာတိ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား တက္ကသိုလ် ထူထောင်ဖို့ သူပိုင် ပစ္စည်း ဇွန်းခယင်းအထိ လေ လံ တင် ရောင်းချ ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း များဖြစ်သော်လည်း စကားမပြောပဲ ၁၃နှစ်ကြာအောင် စိတ်ဆိုးနေကြတဲ့ သမတ ၂ဦး ရှိပါတယ်။ ဒုတိယ သမတ ဂျွန်အဒမ် နဲ့ တတိယသမတ သောမတ်ဂျက်ဖာဆင် တို့ဖြစ်တယ်။ ၁၃နှစ်ကြာ စကားမပြော စိတ်ကွက်နေကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ၂ယောက် သမတသောမတ်ဂျက်ဖာဆင် လက်ထက်မှာပဲ ပြန်စကားပြောကြတယ်။ ၂ဦးစလုံး သမတ အငြိမ်းစားဘ၀ မှာလည်း စာပေးစာယူ ချစ်ခင်စွာ သဘောထားကွဲကြပါတယ်။ သေဆုံးချိန်လဲ ရက်ပိုင်းပဲ ကွာခြားပါတယ်။
ငွေ၊ အာဏာ ကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲမှု
ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝမ်းကွဲရင် လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က စိတ်သဘောထား ကြီးမှ ဖြစ်မှာပါ။
မြန်မာပြည် လက်ရှိ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့. ပညာဉာဏ်နဲ့. နှလုံးသား၊စိတ်သဘောထား တွေက သူခေါင်းဆောင်တဲ့ ၄နှစ်တာကာလ မှာ တပ်မတော်ရဲ့ တဖက်သတ် အပစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်း ထား ခြင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်က လွဲပြီး တနိုင်ငံလုံးမှာ တပ်မတော်က ကျင့်သုံးနေတာ ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့. လက်ရှိ. စစ်ဗိုလ်တွေ. အစိုးရ အတွင်းဝန်. ညွန်ချုပ်. ညွန်မှုး. တွေ. အစိုးရဝန်ကြီးတွေ. အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေ. စိတ်ဓါတ်တွေက ..တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံများနဲ့ ယှဉ်လို့ မရသေးပေမဲ့ နံပါတ်.၁ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် မှီတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တပ်မတော် နဲ့ အင်အယ်ဒီ အာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်း ကြီး ၂ခုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ညှိနှိုင်း ခေါင်းဆောင်ခြင်းက ကောင်းပါသလား။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင် ရှိပါသလား?။ .
မြန်မာပြည်သူလူထုခမြာ မကြေနပ်ခြင်း. စိတ်ပျက်ခြင်း များစွာ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လက်ခံ ဝန်းရံ နေကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာနဲ့ငွေ အများကြီးဆုံးရှုံးသွား သူတွေနဲ့ သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေ တစ်ချို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်နေတာ ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါ။ တစ်ချို့ ကတော့ အစိုးရကို ညံ့လို့ ဆိုပြီး သူတို့ပဲ အစိုးရလုပ်ချင်လို့ ပါတီထောင်ကြတယ်။ တစ်ချို့က မိမိအကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ဖို့ ပါတီထောင်၊ အတိုက်ခံ လုပ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ တက်တဲ့အစိုးရ ကို အဆိုးမြင်ဝါဒ နဲ့ အပြစ်တင်တဲ့ မီဒီယာစတိုင် တိုက်ခိုက်ကြတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်အယ်ဒီပါတီ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများက စံပြနမူနာ ဖြစ်နေဖို့ပါ။ အင်အယ်ဒီ သာမက တပ်မတော်နဲ့၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှာ ခေါင်းဆောင်ညံ့တွေ အများကြီး ရှိနေမှာပါ။ မိမိ က ညံ့ပေမဲ့ အဆက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရှိနေရပါမယ်။ တပ်မတော် ကလည်း နောက်က လိုက်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်း တပ်မတော်သားတွေ ထွက်ပေါ်လာမှာပါ။
မြန်မာပြည် အနာဂတ် မြန်မြန် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး ကတော့..ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ကို လိုက်တဲ့နည်းလမ်း တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အောက်လူတွေ ဆူပူတာ အရေးမကြီးပါ။ တွေ့ဆုံဖြေရှင်း နိုင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေ မဆူ မပူ ကြပါစေပဲ ဆုတောင်းကြရမှာပါ။
ဇော်အောင်(မုံရွာ) - ၂၀၂၀ အကြို စဉ်းစားစရာများ Reviewed by MoeMaKa on 10:00 AM Rating: 5